VaTsvangirai Vanokurudzira Vane Mari Kutanga Mabhizinesi muZimbabwe
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vanoti vemabhizimisi vakasununguka kuuya kuZimbabwe kuzotanga mabhizinesi kuitira kuti vabatsire mukusimudzira hupfumi hwenyika. VaTsvangirai vataura mashoko aya pamusangano wezvehupfumi waitirwa muJohannesburg, kuSouth Africa.
Vachitaura pamusangano uyu, VaTsvangirai vakurudzira vezvemabhizimisi nenyika dzepasi rese kuti vaite mushandira pamwe neZimbabwe mukumutsiridza hupfumi hwenyika.
VaTsvangirai vavimbisa kuti hurumende ichaita zvese zvainogana kuita kuitira kuti mutemo wekuendesa hupfumi kuvatema, urege kupa mukana wekutorwa kwemabhizimisi nechisimba. Vati chirongwa chekuti makambani ekunze ape zvimwe zvikamu zvawo kuvanhu vatema vemuZimbabwe, hachizoitwi nechisimba, uye vese vanoda zvikamu mumakambani iwayo, vachatenga zvikamu izvozvo.
Kunyange zvakadaro, nyanzvi yezvemutemo wemabhizimisi, Va Sydney Shoniwa, vayambirawo vachiti kana hurumende ikatadza kunyatsotsanangura mutemo uyu, zvirongwa zvekukwezva vemabhizimusi zvichashaya basa.
VaTsvangirai vatsinhirazve nyaya yekukosha kwekuti mapato ese ezvematongero enyika ashande nesimba mukuona kuti sarudzo dzinouya dzinenge dzakachena. Vati gwaro remazita evavhoti runofanirwa kugadziriswa, uye pasave nemunhu anoshungurudzwa, kusave nemunhu anopindira mubasa rekomisheni inoona nezvesarudzo, uye kusavepo kwevachada kuviga zvabuda musarudzo.
Zvichakadaro, mupepeti wenhau we The Economist, Va Xan Smiley, vati South Africa nenyika dzepasi rese vanofanirwa kupa yambiro yekuti zvirango zvehupfumi zvichabvisva chete kana kukaitwa sarudzo yakachena muZimbabwe.
Musangano wekuzeya nzira dzekumutsiridza hupfumi muZimbabwe, wakarongwa ne ‘The Economist’ uye wapindwa nevezvemabhizimusi, nyanzvi panyaya dzehupfumi pamwe nevanokweretesa mari yezvirongwa zvemabhizimisi.